Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Yangasese, i-Studio, i-Park 520 Hotel rm520 - I-Airbnb
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Yangasese, i-Studio, i-Park 520 Hotel rm520
West Yellowstone, Montana, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Yanxin
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Yanxin izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Thola ohlangothini lwentaba eduze kuka-191 cishe amakhilomitha angu-9 ukuya enyakatho yeWest Yellowstone! Kusukela kusitayela se-rustic farmhouse yekhaya kuya kusakhiwo esisebenzayo sethemba ukuthi uzoyijabulela njengoba senza.Le ndlu entsha eyakhiwe kabusha inombhede ongu-queen oyi-1 kanye negumbi lokugezela. Lapha, ungase uhlangane nezimbila zasendle, izinyathi zasendle, izinyoni ezihlukahlukene, njll... Kubavakashi abathanda imvelo, indawo yethu izoba yindawo yokuphumula emnandi.
Ukuze sinciphise ubungozi be-COVID-19, sivale zonke izindlu zethu ezakhiwe ngamapulangwe ngo-2020. Kulo nyaka ozayo, siyajabula ukuzwa lesi simo sobhubhane siphenduka silawulwa. Noma kunjalo, sisazoqhubeka nokusebenzisa inqubomgomo yokuvula eqaphile futhi sisebenza kuphela ngezinkathi zonyaka (ehlobo). Zonke izindlu zethu ezakhiwe ngamapulangwe ziza nemikhiqizo ehambisanayo yokubulala amagciwane, futhi sizozinakekela ngokwengeziwe ukuze sibulale amagciwane ezindaweni ezivame ukuthintwa phakathi nokubhukha.
4.89 · 70 okushiwo abanye
Uzothola indawo yokudlela/ibha yesitayela sezwe esentshonalanga eduze kwekhabhinethi. Sikumema ngobuqotho ukuthi uzozitika kuvulandi ongaphandle ngenkathi ujabulela indawo ekhangayo yasendaweni yase-Yellowstone!
Ngesikhathi sobhubhane, sigcina ukuxhumana okulinganiselwe kanye nebanga lokuxhumana nawe ukuze siqinisekise ukuthi sobabili siphephile.Kanye ezinsukwini ezimbili, sizokuthumela umlayezo ukuze sikubuze ukuthi uyayidinga yini isevisi yokugcinwa kwendlu (ukushintsha amathawula, ukulahla udoti, njll.) ngosuku olulandelayo. Zizwe ukhululekile ukusithumelela i-SMS noma usishayele noma nini uma udinga.
Ngesikhathi sobhubhane, sigcina ukuxhumana okulinganiselwe kanye nebanga lokuxhumana nawe ukuze siqinisekise ukuthi sobabili siphephile.Kanye ezinsukwini ezimbili, sizokuthumela um…
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$130.
Hlola ezinye izinketho ezise- West Yellowstone namaphethelo